Yakha Isikweletu Sebhizinisi - Ukusungula Imalimboleko Yezinkampani Nokukhulisa Imali
Ukusungula Izikweletu Zenkampani Yakho kuyisinyathelo esibalulekile ekuthuthukisweni kwayo. Ukwakha iphrofayili yesikweletu esihlanganisiwe kwehluke kakhulu kweyakho, noma ku- "Ikhasimende Lomthengi" ngoba kususelwa kwisikweletu esinikezwe ngqo enkampanini yakho yizikhungo zezimali nabathengisi, futhi hhayi ngokusekelwe noma okuqinisekisiwe nganoma iyiphi indlela esikweletini sakho. Izinhlangano ezahlukahlukene zokubika zisebenzisa izindlela ezahlukahlukene ukukala "ukufanele izikweletu" kwenkampani yakho kepha zonke zibika ngalezi zakhiwo ezimbili eziyisisekelo: Ngabe inkampani yakho ikhokhele isikhathi esingakanani isikweletu sayo esikhathini esidlule? Ngabe inkampani yakho iphilile ngokwezimali ukukhokha izikweletu zayo? Kubalulekile ukusungula iphrofayili yebhizinisi lesikweletu ukuze uvikele imigqa yokusebenza kwesikweletu nezinye izinhlobo zemali mboleko evela ezikhungweni zezezimali. Lezi zikhungo zithanda ukusebenza nezinkampani ezinerekhodi lokukhokha elifakazelwe, nekhono lokubuyisela izikweletu ezikhona. Lokhu kubuye kube ngokweqiniso kwabathengisi nabathengisi abangaba khona: iningi lizocubungula isikweletu sakho senkampani yakho ngaphambi kokukunikeza isikweletu. Ukuthola noma ukuqashisa impahla yebhizinisi lakho kungenye indawo lapho kubalulekile khona ukwakha iphrofayili yesikweletu sebhizinisi: Ukuba ne-Corporate Corporate noma iphrofayili yesikweletu yenkampani ngemigomo emihle kungaholela emigomweni nakwizilinganiso ezinhle, okungasho amanani aphansi enzalo nemali egciniwe!
Yakha Ibhizinisi Lesikweletu - Izinzuzo Zekhredithi Ehlukile
Ezinye izinzuzo zokusungula iphrofayili yesikweletu sebhizinisi lakho ifaka phakathi amandla wokusungula ubudlelwano obusekelwe ezikweletini nabathengisi noma abathengisi, ukuthola kalula imalimboleko yempahla, ukuthola imalimboleko yemoto noma ukuqashisa, nokusungula imigqa yokusebenza kwesikweletu kusuka emabhange angewona. kususelwa kwisikweletu sakho noma esiqinisekisiwe, uqobo. Njengoba kushiwo ngenhla, lezi zikweletu nezikweletu zitholwa yinkampani noma ibhizinisi elifanele - ibhizinisi elihlukaniswe ngokomthetho nabanikazi balo. Lokhu kungazuzisa ikakhulukazi uma unomlando wesikweletu ongaphansi kwesisekelo ngoba akukho kuhlolwa kwesikweletu sakho. Lapho isikweletu senkampani sesisunguliwe futhi sagcinwa, ukubolekwa imali noma ukunwetshwa kwesikweletu kuncike ekuzuzweni kweprofayili yesikweletu yenhlangano, ngaphandle kwesiqinisekiso somuntu siqu esidingekayo. Uma nje impahla ethengiwe iwela ngaphansi kwezinkombandlela ezifanele, futhi kuthathwa izinyathelo eziqinile zokuqinisekisa ukuthi ziyatholakala futhi zisetshenziswa ngendlela efanele, khona-ke ukutholwa kwalezi zimpahla kusendaweni enhle yokutholwa yinhlangano enesikweletu esihle.
Amabhizinisi Ahlukile Nokulawula Ubungozi
Esinye isizathu sokusungula iphrofayli yeBhizinisi Lesikweletu ukuthi ihlinzeka ngokwahlukaniswa kwemali nezimpahla ezivela kumuntu wakho, futhi kuhambisana nokugcina ifomu lebhizinisi. Lokhu kuhlukana kubalulekile ngenxa yezizathu ezimbalwa. Okokuqala nokubaluleke kakhulu, kuyasiza ukunciphisa umkhawulo wesikweletu sakho ngokuqinisekisa ukuthi azikho imali zenkampani (noma izikweletu) ezihlanganiswa nezimali zakho. Uma inkampani nephrofayili yesikweletu sebhizinisi ilawulwa kahle, kunzima kakhulu kubabolekisi ukuthi "bahlabe iveli yenkampani" uma kuziwa ekuphishekeleni inkampani ukuthola izikweletu ezingekho. Uzobe ulondoloze ubuqotho besimo sebhizinisi lakho elehlukile, futhi uzoba nomkhawulo omkhulu noma yisiphi isikweletu esiqondile, nesiqondene nomuntu. Lokhu kunomthelela omkhulu ezimpahleni zomuntu njengoba zivikelwe ngokuphepha ngoba izikweletu nezikweletu zitholwe yinkampani, hhayi umuntu. Ithuba lokuqalwa kwenhlangano ukwehlukanisa umnikazi (ama) nobungozi kanye nokunciphisa isikweletu. Ngokusebenzisa iphrofayili yakho yesikweletu kuzodedela isimo sebhizinisi sakho esingokomthetho sebhizinisi lakho, ngaleyo ndlela ukukuvulela mathupha kunoma yikuphi ukuqulwa kwamacala okuhlose enkampanini yakho. Okufana nokuhlanganiswa kwezimali, ukusebenzisa iphrofayela yakho yesikweletu noma impahla yakho yangasese ukuqinisekisa ukubolekwa kwemali kuzokwenza ube umdlalo olungile wokuqongelela noma amasudi wesikweletu avela emabhange nakwabanye ababakweletayo. Lokhu kubuye kube njalo kuma-ejensi wentela noma alawula; noma yiluphi uhlobo lwesiqinisekiso semalimboleko esiqondene nomnikazi webhizinisi isikweletu senkampani noma isikweletu lizobonwa njengokulahlwa kwefomu lenkampani - lokhu kungaba nemiphumela embucayi yentela engathinta ngqo isikhwama sakho.
Izikweletu Zokwakha Zokwakha
Isikweletu sebhizinisi singathatha izindlela eziningi, futhi ukunquma ukuthi hlobo luni lwesikweletu sebhizinisi olusebenzela inkampani yakho kubalulekile ekusetshenzisweni ngempumelelo kwaleso sikweletu, nokukhula okuqhubekayo kwephrofayili yesikweletu yenkampani yakho.
Ekuqaleni, iningi labaninimabhizinisi abancane bazosebenzisa izikweletu zabo, noma eminye imithombo engahlelekile (njengokuboleka kubangani noma isihlobo), noma baqale ukusebenza ngokuthola ibhizinisi elincane noma imali mboleko encane kuhulumeni (SBA). Ngenkathi lokhu kungaba yimithombo kuphela yemali eyimali noma yezimali esebenzayo ekuqaleni kokwakhiwa kwebhizinisi lakho, ukuthola isikweletu sendabuko kanye nokubolekwa kwemali emabhange nakwamanye amafemu (kufaka phakathi abathengisi nabathengisi) kubhizinisi noma ezingeni lebhizinisi kuzodingeka ekusebenzeni futhi ukukhula kwenhloso yakho. Lokhu kuzobucayi kusuka kokubili ngokwezezimali nangokubukwa kwesikweletu.
Kukhona izinyathelo ezilula, eziyisisekelo ongazithatha ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza kwakho kwesikweletu kuyabikwa ezinhlanganweni ezahlukahlukene zokubika. Ezinye izinyathelo eziyisisekelo yilezi:
Ukuqinisekisa ukuthi abathengisi bakho babika kunoma yiziphi Izikhungo Zokubika Izikweletu zebhizinisi.
Qinisekisa ukuthi izinkokhelo zenziwa ngokwemibandela evunyelwe ngabakweletisi noma abaphakeli bakho.
Gcina izincwadi ezinembile bese ulandela imigomo efanelekile yokubalwa kwemali yohlobo lwebhizinisi lakho.
Lapho usuqala isikweletu sebhizinisi nganoma iyiphi imfashini, ibhizinisi noma inhlangano inikezwa “ibanga” noma ukukalwa ngabenzeli bezilinganiso abahlukahlukene (i-Dun & Bradstreet, i-Experian Business, i-Standard & Poors, i-BusinessCreditUsa, i-FDInsight, njll.) Futhi lokhu kukala kuyasetshenziswa ngenxa yamabhange ahlukahlukene, abathengisi, noma abatshalizimali ukuze kutholakale izinga lobungozi obabandakanyeka ekunikezeni isikweletu senkampani noma ukutshala imali ebhizinisini okukhulunywa ngalo. Lezi zilinganiso zibhekwa zodwa, noma zibalwa (lapho inani lesikweletu lifanelekile, ubude besikhathi ukhona, izikweletu, inzuzo, njll. Kubhekelelwa kuzo) ngabazokweleta, abathengisi noma abatshalizimali lapho benquma ukuthi bazonikeza noma cha , noma invest in, inkampani. Ngeminye imininingwane yokuthi ungakha kanjani isikweletu sebhizinisi futhi Izikweletu Zobumbano sicela ubone imininingwane enikeziwe ejensi ngayinye yokubika isikweletu.
Ngaphandle kokuthi uchwepheshe onolwazi asiza ekwakheni lesi sikweletu sebhizinisi, kuvame ukuba nzima kakhulu ngebhizinisi lokuqala noma inkampani entsha enikezwe isikweletu ngokwenzuzo yayo. Imalimboleko edingekayo nemigqa yesikweletu ngokuvamile izodinga ukuthi ekuqaleni iqinisekiswe ngumnikazi webhizinisi, ngephrofayili yakhe yesikweletu kanye nesilinganiso esisetshenziselwe ukuthola inani lesikweletu elikhona. Kungathatha iminyaka yokusebenza okuphumelelayo nokubika ezinhlanganweni ezahlukahlukene zokubika izikweletu zebhizinisi noma inkampani ukukhulisa isikweletu sakho futhi kusizakale kwizikweletu ezahlukahlukene zebhizinisi nasemigqeni yokusebenza yesikweletu etholakala ngamanani amahle (ngaphandle kokudinga amaphrofayli omuntu abanikazi). Izinkampani Ezihlanganisiwe zinikeza usizo olusemqoka, lochwepheshe ngokwakha iphrofayili yesikweletu yenkampani, futhi singasinciphisa ngokumangazayo inani lesikhathi esidingekayo sokuqalisa iphrofayili yesikweletu enhle kakhulu. Sinikeza imiphumela efakazelwe- Ungasungula isikweletu sebhizinisi seqiniso, ngokushesha futhi kalula. Shayela manje!
Shayela ochwepheshe bethu ukuthi ufunde kabanzi mayelana nokuthi izinhlelo zethu zesikweletu, iziqinisekiso zokweneliseka zingakusiza kanjani! 800.830.1055 Ukukhokhelwa kwamahhala noma 661.253.3303 I-International.